Ny intrahistory mahaliana momba ny tontolon'ny masoandro an'ny Apple Watch | iPhone News
Miguel Hernandez | 09/05/2022 18:00 | Apple Watch, Apple products
Ny Apple Watch dia manana sehatra marobe, ary toy ny hoe tsy ampy izany, ny ankamaroan'izy ireo dia azo namboarina saika harerahana. Tsy ohatra na fanondroana aho, satria nampiasa endrika Apple Watch mitovy aho nanomboka tamin'ny 2016, saingy tsy midika izany fa afaka gaga aho taorian'ny lisitry ny safidy omen'ny orinasa Cupertino ho antsika.
Lazainay aminao ny tantaram-piainana mahaliana momba ny tontolon'ny masoandro ao amin'ny Apple Watch, izay manafina tsiambaratelo bebe kokoa noho ny noeritreretinao. Fantaro izany miaraka aminay, iza no mahalala, mety ho ampiasainao isan'andro koa izany.
Hatramin'ny nanombohany tamin'ny taona 2014, Apple dia nampitombo ny isan'ny dials izay azon'ny famantaranandro maranitra, ary noho izany ny malaza indrindra azo ampiasaina amin'ny tantara, dia afaka aseho. Avy amin'ny sehatra teratany 10 ka hatramin'ny 31 mahery miaraka amin'ny fanamboarana mifanaraka aminy izay ahafahantsika manitsy, avy ny orana androany, fa aza manahy fa tsy tantera-drano ny Apple Watch.
Na dia eo aza ny zava-misy fa ny ankamaroan'izy ireo dia mifantoka amin'ny fanomezana ny ambony indrindra azo atao ny vaovao amin'ny toerana kely indrindra, misy ihany koa ny redoubt kely sisa ho an'ny tantaram-pitiavana ny astronomia sy ny selestialy, izany no nitondra anao eto androany sy izay handeha Avelao. Lazaiko aminao izay ao ambadiky ny dial masoandro an'ny Apple Watch.
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny watchOS 6 tamin'ny Aprily 2020, dia nipoitra ny dial solar, saingy io lohahevitra io dia manana dikany avo roa heny noho ny fahatongavan'ny lohataona. Angamba ianao anisan'ireo olona an-tapitrisany mijaly amin'ny fikorontanan'ny fizaran-taona (SAD). Ny fahatongavan'ny lohataona dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny toe-tsaintsika miaraka amin'ny soritr'aretina mitovy amin'ny an'ny fahaketrahana fanta-daza, ary ny iray amin'ireo fanafody tsara indrindra amin'ity aretina vonjimaika ity dia ny fankafizana tanteraka ny hazavan'ny andro.
1 Ny antsipirian'ny dial masoandro
2 Ahoana no ahafantarana ny fiasan'ny tontolon'ny masoandro
Ny antsipirian'ny dial masoandro
Ny tarehin'ny masoandro amin'ny Apple Watch dia misy dial misy fanamarihana 12 fa toy ny famantaranandro 24 ora. Ao anatin'izany, ny ampahany amin'ny dial dia aseho amin'ny manga mazava ary ny ampahany iray amin'ny manga navy, amin'ity tranga ity Ny faritra misy hazavana dia hamaritra tsara ny ora hazavan'ny masoandro izay hankafizintsika mandritra izany andro izany arakaraka ny toerana misy antsika, noho izany, ny faritra maizina dia manondro ny ora alina. Amin'ny ankapobeny, ny tsipika manavaka ny loko roa dia manondro ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro.
Amin'ny lafiny iray, ny dial izay manamarika ny fotoana dia hanao simulate amin'ny maha Masoandro, mitovy amin'ny hananantsika sehatra anatiny kely hafa izay hampiseho amintsika ny famantaranandro mahazatra, izay azontsika amboarina na tiantsika amin'ny endrika analoga, na raha tianay amin'ny endrika nomerika. Ary farany, ny zorony efatra amin'ny tarehy (satria ny Apple Watch dia famantaranandro "efamira") dia azonao ampiana izay mety ho fahasarotana, satria ny sasany amin'izy ireo dia hifanaraka amin'ny contour amin'ny sehatra voafantina, toy ny mahazatra.
Ary koa, raha misafidy ny subdial nomerika isika, homena tanana fanindroany manodidina ny famantarana ny ora isika, mba hananantsika mazava tsara indrindra.
Farany, raha manindry ny sphere isika dia homena fampahalalana momba ny fotoana marina amin'ny haavon'ny masoandro amin'ny andro misy antsika, ary koa tsipiriany momba ny totalin'ny ora antoandro izay hankafizinay.
Ahoana no ahafantarana ny fiasan'ny tontolon'ny masoandro
Mazava ho azy fa ireo fampahalalana rehetra sy loko isan-karazany nomen'ny tontolon'ny masoandro an'ny Apple Watch dia natao ho an'ny mihoatra noho ny hijerena ny andro sy ny alina. Voalohany indrindra, hanomboka amin'ny fototra iray mety hanimba ny sainao isika: Raha ny zava-misy, sarotra kokoa noho ny fiovan'ny andro sy ny alina ny mangiran-dratsy.. Eny tokoa, ny fotoana marina dia miankina amin'ny fitaovana tianao homena ny fiposahan'ny masoandro, ary koa ny toerana misy anao.
Mba hanatsorana ny fahalalanao, Hampiasa ny teny hoe "tava" isika, izay tsy mihoatra na latsaka noho ny famantarana ny hazavana mialoha ny maizina sy ny maraina. Izany hoe, ny dial masoandro an'ny Apple Watch dia mampiasa loko manga dimy samy hafa mba hanehoana ny fotoanan'ny andro (na ny alina) izay iainantsika, andao hovakintsika avy amin'ny maizina indrindra ka hatramin'ny maivana indrindra:
Sary: Solinruiz (ao amin'ny WikiPedia)
Alina: Ny loko maizina kokoa amin'ny dial dia maneho tsotra sy tsotra ny alina mihidy.
takariva astronomika: Io lokon'ny sphere io, ilay faharoa maizina indrindra, dia hitaratra ny takariva astronomika, izany hoe rehefa <18º ny Masoandro ary ahafahantsika mahita kintana manana halehibe fahenina amin'ny maso mitanjaka.
Twilight nautika (Nautical Twilight): Amin'io fotoana io dia haseho izany rehefa <12º eo ambanin'ny faravodilanitra ny Masoandro. Tonga eto dia ho hitan'ny maso ny kintana amin'ny habeny voalohany sy faharoa.
alina sivily: Ny loko farany dia manondro fa ny Masoandro dia < 6º eo ambanin'ny faravodilanitra ary noho izany, ny kintana voalohany sy ny planeta dia hita.
andro: Ny loko maivana kokoa amin'ny dial dia hitaratra ny ora amin'ny hazavan'ny andro.
Ary izao no fomba Apple dia nanapa-kevitra ny hiasa amin'ny fepetra tsy mahazatra ho an'ny orinasa tsotra, fa mahazatra ao amin'ny orinasa Cupertino, sehatra iray izay, na dia eo aza ny zava-drehetra, dia hampiasaina ho fitsipika ankapobeny fotsiny amin'ireo tia astronomia. na ao anatin'ny kilemany ireo izay namaky ity lahatsoratra ity ka nanapa-kevitra ny ho voataonan'ity tontolon'ny masoandro mahaliana ity.
Na dia eo aza ny zava-drehetra, dia sehatra tsara tarehy ho azy manokana, amin'ny tonony manga tena mahaliana, na dia manantitrantitra aza i Apple amin'ny fahazarany tsy manolotra ny fahasarotana amin'ny loko voajanahary amin'ny sehatra rehetra, mieritreritra aho fa miaraka amin'ny fikasana hitahiry ny ody. karazana spheres manokana ho an'ny famolavolana tsirairay. Na izany na tsy izany, fotoana tsara ho anao ny hanefanao ny tontolon'ny masoandro amin'ny Apple Watch, afaka mitsiky ianao izao satria efa fantatrao daholo ny ao anatiny sy ivelany, afaka mahita izany amin'ny maso mitovy ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ny intrahistory mahaliana momba ny tontolon'ny masoandro an'ny Apple Watch
Apple dia mizara fanamboarana ho an'ny fampandrenesana tsiambaratelo diso miaraka amin'ny AirTags